Tunio Zafer Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Tunio Zafer
Chitatu, November 17, 2021 Chitatu, November 17, 2021 Tunio Zafer
Kugona kuchengeta mafaera akakosha senge mafoto, mavhidhiyo uye mimhanzi zvisina musono mugore itarisiro inokwezva, kunyanya ne (zvinei) ndangariro dzakasimba munharembozha uye mutengo wakakwira wekuwedzera ndangariro. Asi chii chaunofanira kutarisa kana uchisarudza gore rekuchengetedza uye faira-kugovera mhinduro? Pano, tinoputsa zvinhu zvishanu izvo munhu wese anofanira kufunga nezvazvo asati afunga kwekuisa data ravo. Kudzora - Ndiri kutonga here? Imwe ye
Chidzidzo chevashambadziri uye maECOs pamusoro pezhizha chakawana kuti vashanu chete muzana havana kuwana zvakanakira hupenyu mukukiya - uye hapana kana munhu mumwe chete akati vakatadza kudzidza chinhu panguva iyoyo. Uye nechinofungidzirwa pent-up chinodikanwa chekushambadzira chiitiko mushure mekuvhara kwegore, zvakangofananawo. Zve xPlora, yekushambadzira uye yedhijitari inomiririra iri muSofia, Bulgaria, kugona kugovera dhizaini dhizaini